Insiza encane yokuguqulwa bukhoma kwamafayela wefayela
Ngenkathi ngiqala ukuhlala kulokho ukusetshenziswa kwe-linux okusetshenziselwa amaseva wami akude ngangidinga indlela yokufaka ngokushesha amasistimu wefayela lezimpande kusokhaya osokhaya, ngakho ngabhala [paroodise].
Ukuze ukwazi ukukhanyisa idivaysi yebhulokhi eboshiwe oyidingayo yehlisa . Ungehla kuphela uma uyeka ukuyisebenzisa. Ukuyeka ukuyisebenzisa udinga ukuqala kabusha izinsiza zakho endaweni, kusuka kolunye uhlelo lwefayela lempande. Lokhu kufana nalokho i- initramfsuma ivula i-OS esekwe ku-linux, i-kernel isebenzisa isithombe se-boot esisetha uhlelo lwefayela kusuka lapho kuyiqiniso init service yethulwa.
Ukufeza lokhu ku isivele igijima system kufanele siqaphele ukuthi siziqala kanjani kabusha izinqubo zethu. Asikwazi ukubulala i-ssh ngaphandle kokuthi siqiniseke ukuthi iskripthi sethu sizosebenza size siphumelele.
Yonke inqubo ilula kakhulu kuma-distros angenasisekelo, ngoba izingwegwe zesistimu zingene ngokujulile ku-linux kernel, ukuhlangana nezinqubo zayo ngokunganaki kungadala ukwethuka kwe-kernel ... empeleni ekusabalalisweni kwakamuva yilokho okuvame ukwenzeka :)
Ngenkathi ngibhala le nsiza mini kubonakala ngathi angizazi izindlela ezizinzile zokuveza izinqubo ezadlula isikhathi sokuqala ssh, Kufanele ibhalwe kabusha ngezindlela ezingaguquguquki.
Yonke inqubo iqukethe
ukukopisha amafayela amancane adingekayo ukuqala kabusha uhlelo lwefayela kwimemori
ukuhambisa (noma ukubuyisela kabusha) amaphuzu we-kernel mount (/dev, /proc, /sys)
ukubulala izinsizakalo zangaphambilini ezazivezwa yisihlahla senqubo esimile
ukwenza kabusha uhlelo kusistimu entsha yefayela evunyelwe,systemctl daemon-reexec
Uma konke kuqeda ngempumelelo kungenzeka kuleli phuzu kuveze insizakalo entsha ye-ssh bese ungena ngemvume kuseshini lapho amaphoyinti okuqala akhona angalungiswa.
Thumela Amathegi: amathuluzi, ukusingathwa, mayelana